नेकपा कार्यकर्ताको घरमा ‘तँ’, ‘तिमी’ को खैलाबैला, पारिवारिक बैठक नै भंग ! - Bidur Khabar
विदुर खबर २०७६ माघ ११ गते ९:००
‘सुन्नुहोस् त तपाईं पनि खाना पस्कनुहोस् सँगै खाउँला’ भात खान बसेका श्रीमानको बोली सुनेर श्रीमती झस्किइन् । कहिलेकाहीँ तिमी भन्नुबाहेक सधैं तँ भनेर बोलाउने श्रीमानलाई आज के भयो ? बिहानसम्म छिटो भात पस्क मलाई ढिलो भयो भनेर अरुभन्दा छिटो खाएर निस्कने श्रीमान आज किन सँगै खाउँ भन्दैछन् ? मलाई नै भनेका हुन् कि अरु कसैलाई ?
‘बेलाबेला परिवारका सदस्य सबै जुटेर पारिवारिक बैठक बसेर सल्लाह सुझाव तथा आलोचना गर्नू । घरको काममा कार्यविभाजन गर्नू, अप्ठ्यारो काम आफूले लिनू….’ छोरीले पार्टीको सर्कुलर पढिन् र हाँस्दै भनिन्, ‘बाबा बैठक पनि बस्नुपर्ने रहेछ नि, कतिखेर बस्ने हो ? आलोचना पनि गर्नु रे । तपाईंको गर्न पाइने हो कि होइन ?’
‘हाहा चिटर बाबा….नेता नै पर्नुभयो नि…बाठो…’ छोराछोरीले एकै स्वरमा भने ।
‘ल ल खाना खाउँ, सबैलाई पस्क्यौ हैन ? ल एकैपटक सुरु गरौं त खान । एक, दुई, तीन…..’ श्रीमानले श्रीमती र छोराछोरीतिर हेर्दै गाँस हाले ।
‘….छोराछोरीको विवाहलाई सरल र मितव्ययी बनाउनू । जन्मदिन, ब्रतबन्ध, पास्नी जस्ता परम्परागत संस्कारलाई घरपरिवारमा मात्र सीमित गर्नू ।’
‘हो त नि…म पनि अस्ति साथीको बर्थडेमा गएर आएको, अब मेरो बर्थडे घरमै मात्र मनाएर कहाँ मिल्छ ? हुँदैन हुँदैन’ छोरीले सही थापी ।
‘पर्ख न पर्ख एकछिन पढेर सक्न देउ’ भन्दै घरमुली कार्यकर्ताले फेरि सर्कुलर पढे –‘महिनामा एक दिन गाउँ वा टोलका सबै परिवारजनबीच वनभोज या सहभोज गर्नु….।’
‘आफ्नो जीवनलाई नागरिकबीच खुल्ला किताबजस्तै राख्नू ।….भ्रष्टाचार, कालोबजारी, गैरकानुनी कमिसन, करछली, अनियमितता जस्ता अपराध नगर्नू….’ यति पढेपछि श्रीमान पनि रोकिए ।
‘हैन के भयो बाबा, पढ्नुस् न अरु…’ सुनेर रमाइलो मानिरहेका छोराछोरीले भने । ‘ल यो पालना गर्न नसकिने सर्कुलर रैछ, कहाँ सकिन्छ भन्याजति सबै गर्न ?’ बाउ बल्ल लाइनमा आए ।
‘यस्ता नियम, कानुन, आचारसंहिता, प्रतिबद्धता, आश्वासन, चुनावी घोषणा यी सबै कुरा सुन्नलाई रमाइलो मात्र हो । व्यवहारमा देखाउनलाई हैन । बल्ल बुझ्नुभयो होला नि’ श्रीमतीले गाँठी कुरा खोलिन् । ‘ल ल हिँड अब सुतौं, आजको बैठक यत्ति नै’ श्रीमानले सर्कुलरको पाना पोको पारेर अँगेनोमा फालिदिए ।